Izintshisakalo - Izinja Zomhlaba | I-Dogs World (Ikhasi 2)
Ingabe inja yakho iya emibuthanweni? Kunezimbangela eziningi ezingaba khona, kanti ezinye zihlobene nempilo yakho. Ngakho-ke unganqikazi ukungena futhi uthole ukuthi kungani ikwenza.
Izintshebe zezinja zibalulekile ekuqondisweni kwazo, kanye nokugcwalisa iphunga nokuthinta kwazo. Faka bese uthola okuningi ngazo.
Ingabe inja yakho inayo i-wax emnyama ezindlebeni zayo? Uma kunjalo, ngena sizokutshela ukuthi yini imbangela engaba khona nokuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe ukuthuthuka.
Uyayivumela inja yakho ikhothe ubuso bakho?
Ingabe inja yakho ikhotha ubuso bakho? Noma kungumbukiso wothando, kubalulekile ukuthi uqonde ukuthi akuwona umqondo omuhle ngaso sonke isikhathi. Ukungena.
Izizathu zokuthi kungani izinja zikhotha imilomo yezinye izinja
Kungani izinja zikhotha zodwa? Uma ufuna ukwazi, unganqikazi bese ufaka ukuthola izizathu ezahlukahlukene ezikhona.
Kungani inja yami ixega lapho ihamba?
Ngabe unayo inja futhi ingabe ukhathazekile ngokuyibona idengezela ngapha nangapha lapho ihamba? Ngena uthole ukuthi kwenzakalani kumngani wakho.
Kufanele ngithene inja yami ngineminyaka emingaki?
Uma unenja yesifazane futhi ungafuni ukuthi ibe nemidlwane, kunconywa kakhulu ukuthi ungayinaki. Faka sizokutshela ukuthi iyiphi iminyaka engcono yokuyisebenzisa.
Ukukhipha inja kubalulekile, kepha kufanele ngiyikhiphe kangaki ngosuku? Thola lapha bese umboza izidingo zakho zokuhamba ngoboya.
Ngabe i-paws evuthayo izinja iphola kanjani? Faka sizokutshela ukuthi yini izimbangela nokuthi yini okufanele uyenze ukuyinakekela.
Kungani izinja zibambeka lapho zikhwelana?
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi kungani izinja zivame ukubambeka lapho zikhwelana? Uma ufuna ukwazi, ngena sizokuchazela.
Wake wazibuza ukuthi kungani izinja zikhotha izinyawo? Ngaphandle kokungabaza, kuyindlela yokuziphatha enelukuluku kakhulu. Faka bese uthola ukuthi kungani bekwenza.
Inja yami ibuhlungu
Uma inja yakho idabukile, sizokutshela izizathu zokuthi kungani isilwane sakho singahle sicindezeleke nokuthi ungayisiza kanjani inja ukuthi ijabule futhi.
Iyini imiphumela yokulahlwa yizinja?
Ukulahlwa kwezinja kuyinkinga enkulu kakhulu, kokubili kubantu futhi, ngaphezu kwakho konke, kulabo abanoboya ngokwabo. Faka sizokutshela ukuthi kubathinta kanjani.
Ungazixosha kanjani izinja ku-bitch ekushiseni
Sikutshela ukuthi ungazixosha kanjani izinja kusuka ku-bitch ekushiseni ukuze uhambe uhambe nenja yakho enoboya ngaphandle kokukhathazeka nganoma yini.
Ukuvimbela izimpukane ekulumeni izindlebe zenja yakho ehlobo kulula. Thola ukuthi ungakufeza kanjani lokhu ngokukuvikela ngezichasisi ezisebenzayo.
Wazi kanjani ukuthi inja yami ikhulelwe
Thola ukuthi wazi kanjani ukuthi inja yami ikhulelwe lezi zithiphu futhi uma ikho, funda ukuthi ungayinakekela kanjani inja yakho ukuze ikhulelwe ngokuphepha. Ingabe inja yakho ikhulelwe? Thola!
ICoronavirus nezinja, yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe?
Ngabe unezinja ekhaya futhi ukhathazekile ukuthi zizotheleleka nge-coronavirus noma ukuthi zingadlulisa lesi sifo? Ngena unake.
Thola izinhlobo ezahlukene zezinja ezisebenzayo
Ngabe unesifiso sokwazi ukuthi yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zezinja ezisebenzayo ezikhona namuhla? Ungabe usachitha sikhathi, ngena uzokwazi.
Jabulela uSuku Lwezithandani nenja yakho
Ngabe uhlela ukuchitha wedwa noma uwedwa ngoFebhuwari 14, uSuku Lwezithandani? Ungakwenzi, inja yakho ifanelwe ukuchitha lolo suku nayo.
Ungawugubha kanjani umshado wami nenja yami?
Ngabe ucabanga ukushada futhi ufuna ukuthi inja yakho ibe ngaphezu kwezivakashi nomndeni, ngoba kungenye ingxenye ebalulekile yalokho? Ngena unake.
Qedela umhlahlandlela weSan Antón
Thola ukuthi iSan Antón yenzeka nini futhi kuphi ezindaweni zaseSpain, lapho izilwane ezifuywayo, ikakhulukazi izinja, ziyobusiswa khona.
Izinhlobo eziyisithupha zezinja kanye nokuziphendukela kwazo ngaphezulu kweminyaka eyikhulu
Ingabe kukuheha ukwazi ukuthi izinja ziguquke kanjani eminyakeni eyikhulu edlule? Faka futhi uthole kulezi zinhlobo ezi-100 esikufundisa zona.
Luthini uphawu lwenkanyezi yenja yakho?
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi luyini uphawu lwe-zodiac lwenja yakho ngokuya ngohlamvu lwayo? Ngenxa yalesi sihloko kulula kakhulu. Ngena ubheke.
Uke wezwa ngamabhayisikobho wezinja kepha awazi ngempela ukuthi ayini? Ngena uhlole le ndlela entsha yobumnandi yezinja nabanikazi.
Uke wezwa ngeChow Chow Panda futhi ufisa ukwazi ukuthi ngabe uhlobo lwenja ngempela? Ngena uthole !!
Amapaki amahle kakhulu wezinja e-Andalusia
Ngabe uhamba e-Andalusia nomndeni wakho nezinja noma uhlala kuwo? Ngemuva kwalokho kufanele uthathe ipensela nephepha ubhale phansi amapaki amahle kakhulu ongawathola.
Izinqumo eziyisithupha zonyaka omusha zabathandi bezinja
Ngabe ufuna ukufaka le 2020 usiza izinja, lezo onazo endlini yakho nalabo abasemgwaqweni? Yenza lezi zinhloso ezi-6 !!!
Kungani inja yami igquma lapho idlala?
Udlala nenja yakho noma idlala nenye bese uyabona ukuthi iqala ukubhonga? Faka bese uthola ukuthi kungani ikwenza nokuthi ungayilungisa kanjani.
Ukubaluleka kwenja kubadala bethu
Yize wonke umuntu ecabanga ngenye indlela, ukuba nenja ekunakekeleni abantu asebekhulile kunikeza izinzuzo eziningi, zithole.
Amathiphu namasu ukuze izinja zingahlali ekhaya ebusika
Uma unenja yobuvila esaba ukuphuma phandle ebusika, lalela iseluleko esikhona ukuze bangahlali ekhaya!
Izinsuku ezivundile ze-bitch ekushiseni
Ngabe ufuna ukugibela inja yakho ukuze ibe nemidlwane? Faka le ndatshana bese uthola amaholide enja ekushiseni. Funda kabanzi!!
Ifomula entsha yokubala iminyaka yomuntu yenja yakho
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi inja yakho ineminyaka emingaki? Manje manje, ekugcineni, ungazi. Faka bese uthola ukuthi iyiphi ifomula ongayithola.
Ukudla okunikwa inja ngokweminyaka yayo
Uma uke waba nenja noma unayo ekhaya, uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukwazi ukudla kwenja ngokweminyaka. Esikhundleni salokho, ngena uthole!
Ngabe unayo inja yamanzi ekhaya futhi ukhathazekile ngenkinga yamafindo engutsheni yayo? Faka bese uthola ukuthi ungayilungisa kanjani!
Ingabe unayo inja yamanzi kodwa ayenzi lutho ngaphandle kokukhonkotha? Lokhu kungaba ngenxa yezimbangela eziningana, ngakho-ke ngena ngaphakathi bese uthola ukuthi kungenzeka kwenzekani kuwe!
Uyinikeza nini futhi ngani i-crystalline ezinjeni?
Uke waqaphela ukuthi inja yakho inokulimala okuncane? Sikutshela ukuthi ungayilapha kanjani nokuthi yini okufanele uyenze ukuze ingatheleleki usebenzisa i-crystalline. Ungaphuthelwa!
Kungani ulimi luba nsomi kwezinye izinja?
Wake wacabanga ngezimbangela ezingaba khona zokuthi kungani inja ingaba nolimi olububende? Ngena uthole !!
Ingabe izinja ziyakuthanda ukwanga?
Ngabe ungumuntu onothando olukhulu nenja yakho futhi ungayeki ukuyanga? Ngabe ufuna ukwazi ukuthi uyayithanda yini imicabango? Ngena uthole !!
Wake wazibuza ukuthi wazi kanjani ukuthi izinja zineminyaka emingaki? Noma yini elingana eminyakeni yabantu? Lapha sichaza lokhu nokunye okuningi
Inja yami iyaminza
Ingabe inja yakho iyaminza? Kungaba ngenxa yezimbangela ezahlukahlukene. Uma ufuna ukwazi okwengeziwe, ngena sizochaza ukuthi kumele wenze njani uma uzithola ukulezizimo.
Izinhlobo zezinja zase-Afrika
Uyakuthanda konke okuphathelene nomhlaba wezilwane futhi ikakhulukazi nezinja? Faka bese uthola uhlu lwezinhlobo zezinja zase-Afrika.
Izinhlobo zezinja eziyi-11 ezinamachashaza
Ingabe kuyakudonsa ukunaka ukwazi ukuthi yiziphi izinhlobo zezinja ezinamabala emzimbeni wazo? Ngena uthole, bazokumangaza !!
Ungasihlola kanjani isimo senja elimele
Uyazi ukuthi ungasihlola kanjani isimo senja elimele? Sikutshela ukuthi iziphi izimo eziphuthumayo ezivamile kakhulu zezilwane nokuthi kufanele wenze kanjani.
Iqeda iphunga elingathandeki lomchamo wezinja
Ngabe unelungu elisha lomndeni futhi okukukhathazayo ukuthi alichami, kepha kunuka umchamo? Ngena ubeke amabhuleki kuwo !!
Ngabe ukhathazekile ngokuthi inja yakho izodla amatshe?
Ngabe ukhathazekile ngokuthi inja yakho edlala engadini noma epaki izodla amatshe? Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini imbangela yalokhu? Ngena manje !!
Inja izala isikhathi eside kakhulu sokuphila
Ngabe uyafuna ukwamukela inja kodwa wesabe ukuthi ngeke ihlale iminyaka eminingi? Faka futhi uthole ukuthi yiziphi izinja ezinesikhathi eside kakhulu sokuphila!
Uma ufuna ukwamukela inja yegundane lasePrague, kepha ukhathazekile ngokuthi ungazigcina kanjani izindlebe zazo phezulu, ngena futhi uthole ukuthi ungakwenza kanjani!
Ngabe usanda kuthola isilwane esisha? Ngabe inja yakho noma inja yakho imhlophe futhi awazi ukuthi uzosinika bani Faka bese uthola amagama amahle kakhulu !!
Izinja ziyayeka ukukhula eminyakeni emingaki?
Ngabe usuthathe inja eyi-mongrel futhi wesaba ukungazi ukuthi izoma kanjani ukukhula? Faka futhi uthole ukuthi ungawuthola kanjani umqondo wosayizi wenja yakho!
Kungaba yingozi nini ukuthi inja yakho ikumunce?
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi nini futhi kungani kuyingozi ukuthi inja yakho ikumunce? Faka bese uthola ukuthi akumele sikwenze ukuze singahlaselwa yinoma yisiphi isifo.
Ngabe inja yakho kwesinye isikhathi iyakhala noma idabuke?
Uyabona ukuthi inja yakho ibonakala ikhala kwesinye isikhathi? Awazi ukuthi ungabona kanjani lapho ikhala? Faka futhi uthole ukuthi inja yakho iyakhala noma idabula!
Izinhlobo zezinja eziyohlala zifana nemidlwane
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izinhlobo zezinja okuthi, njengoba iminyaka iqhubeka, zihlale zifana nemidlwane? Ngena uthole !!
Ingabe inja yethu inganikezwa i-aspirin?
Uma inja yakho igule, inemfuluwenza, noma inenxeba elibuhlungu, ungalokothi usebenzise izidakamizwa ezifana ne-aspirin. Faka bese uthola ukuthi kungani kungaba yingozi!
Izinja zibingelela kanjani
Ungathanda ukwazi ukuthi izinja zibingelela kanjani? Unganqikazi: ngena sizokutshela konke ngomkhuba wokubingelelwa kwezinja ukuze uziqonde kangcono.
Kungani izinja zihlasela? Uma ungathanda ukwazi impendulo yalo mbuzo, ngena futhi sizoyiphendula ukuze wazi ukuthi ungazigwema kanjani izinkinga.
Uyazi kanjani iminyaka yenja
Iningi labantu liyazi ukuthi izinja zivame ukuba nenqubo yokuguga ende ...
Ungayithola kanjani umdlwane ekhaya
Ngabe usanda kunikwa inja futhi awazi ukuthi kumele wenze njani noma wenzeni? Ilula kakhulu, landela imihlahlandlela yethu namathiphu ukuze ikhule ijabule.
Zingaki izinja engingaba nazo ekhaya
Zingaki izinja engingaba nazo ekhaya? Uma ungabaza, ngena sizokutshela nokuthi yini okufanele uyicabangele ukubenza bajabule.
Izizathu zokwamukela inja ye-mongrel
Ucabanga ukwamukela? Ngena sizokunikeza izizathu ezimbalwa ezinhle zokuthola inja ye-mongrel. Ungaphuthelwa!
Isebenza Kanjani Imishini Yokuwasha Izilwane
Iningi labantu alazi ukuthi kulezi zinsuku kunemishini yokuwasha izinja etholakalayo ...
Ngabe izinja zingathola i-distemper noma ngabe zigonyiwe?
Ngabe izinja zingathola i-distemper noma ngabe zigonyiwe? Uma ukhathazekile ngempilo yoboya bakho futhi unokungabaza lokho, ngena sizokuxazululela kona.
Izinkinga zokuziphatha ezinjeni ezigqoka amakhola ezijeziso
Yiziphi izinkinga zokuziphatha ezinjeni ezifaka amakolishi ezijeziso? Uma ungabaza, ngena sizokutshela ukuthi kungani kungelona isu elihle ukukusebenzisa.
Ingabe zikhona izinja zedolobha nezasemaphandleni?
Ungathanda ukwazi ukuthi zikhona yini izinja zedolobha nezasemaphandleni? Faka sizokutshela ukuthi umehluko ungubani ngamunye. Ungaphuthelwa.
Umehluko phakathi kwe-neutering nokukhipha
Ukungathathi hlangothi kwenja akufani nokufafaza inja. Faka bese uthola umehluko phakathi kwale misebenzi emibili.
Le yinqubo elula kabi futhi ayibangeli buhlungu, ayibizi kakhulu futhi imvamisa ayisiyo leyo nto, kepha inja kumele ihlaliswe phansi ngoba le yinqubo elula futhi ayibangeli buhlungu, ayibizi kakhulu futhi akuvamisile ukuthi kube nokuhlasela Nokho, inja kumele ihlaliswe i-Endoscopy akuyona into edlula ucwaningo olungenziwa udokotela kuphela ukuze abone umgudu wokugaya ukudla. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi isebenza kanjani?
Faka futhi uthole konke mayelana nama-hiccups ezinjeni, inkinga engavinjelwa ngokulandela izeluleko ezimbalwa eziyisisekelo.
Ungahlukanisa kanjani izinja ezimbili ezilwayo
Uma uke wabona ukulwa phakathi kwezinja ezimbili, uyazi ukuthi kungasabeka kanjani. Izinja zingadala ukulimala okukhulu komunye nomunye futhi kubaluleke kakhulu ukufunda ukuhlukanisa izinja ezimbili ezilwayo. Landela amathiphu esikufundisa wona ngezansi, awusizo kakhulu.
Ubuhlungu bemvelo buyadambisa izinja
Sichaza ukuthi imaphi amaphilisi ezinhlungu emvelo amahle kakhulu wezinja nokuthi ungazisebenzisa kanjani ukuze izinja zakho ezinoboya zilulame ngokushesha okukhulu.
Ngabe umshayisibhakela uyinja eyingozi?
Ngabe umshayisibhakela uyinja eyingozi? Uma ungabaza, ngena sizokutshela ukuthi lesi silwane esihle kakhulu nomngani omkhulu sinjani. Ungaphuthelwa.
Ingabe izinja ziyakwazi ukubikezela ukufa?
Omunye wemibuzo ochwepheshe ekuziphatheni kwezinja abebuzwe ukuthi banalo yini ikhono lokuqagela Ngaphambi kwalo mbuzo singaphendula ngokuthi yebo, ngoba ngenxa yephunga lenja, izokwazi ukuthwebula izinto ezithile abantu abakwazi ukuqonda.
Ingabe izinja zizwa uthando?
Wake wazibuza ukuthi izinja zizwa uthando? Uma unokungabaza ngakho, ngena sizokutshela ukuthi isayensi icabangani.
Ngabe kunesidingo sokuwela inja?
Wake wazibuza ukuthi kuyadingeka yini ukuwela inja ukuze ijabulise? Uma kunjalo, ngena bese sizophendula umbuzo wakho.
Amathiphu okubeletha inja entsha
Lapho i-bitch okokuqala isizobeletha, into esemqoka ukwazi ngokukhulelwa kwe-canine ukuthi ihlala izinsuku ezingama-60. Cha Inja yakho izobeletha ezinsukwini ezimbalwa? Faka bese uthola lawa macebiso ukuze ngalolo suku kungabikho zinkinga.
Amathiphu we-bitch enobudlova ekushiseni
Sikunikeza amathiphu amaningi we-bitch enobudlova ekushiseni. Thola ukuthi ukushisa kukuthinta kanjani nokuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe ukuxazulula isimo.
Umehluko phakathi kwezimpisi nezinja
Uyini umehluko phakathi kwezimpisi nezinja? Uma ufuna ukuthola ukuthi lezi zilwane ezinhle kakhulu zehluka kanjani, ngena.
Inja engenalo uhlobo ihlala isikhathi esingakanani
Inja engenalo uhlobo ihlala isikhathi esingakanani? Uma ufuna ukwazi impendulo yalo mbuzo, ngena futhi sizokutshela nokuthi yini ongayenza ukunweba impilo yakho kancane.
Kungani izinja zizamula?
Ubuwazi ukuthi izinja zizamula njengendlela yokuxhumana nathi? Faka bese uthola ukuthi lokhu kungenzeka kanjani.
Imiphumela emibi ye-Accepromazine ezinjeni
Uma unenja ekhaya, kufanele wazi imiphumela emibi ye-acepromazine kuyo. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi uyazi imiphumela
Wazi kanjani uma inja ingaboni?
Wazi kanjani uma inja ingaboni? Uma futhi ufuna ukwazi ukuthi unakekelwa kanjani ngoboya obungaboni, unganqikazi: ngena uthole.
Izimpawu zokoma emzimbeni ezinjeni
Ziyini izimpawu zokoma emzimbeni ezinjeni? Uma ufuna ukwazi ukuthi ungakugwema kanjani lokhu kuphazamiseka kumngani wakho, ngena.
Yini okufanele uyenze uma inja yami isaba amarokhethi
Uma inja yakho yesaba amarokhethi nemisindo ephezulu, kungaba ngenxa yezici ezithile. Faka bese uthola ukuthi ungamenza kanjani ayeke ukubesaba
Kungani izinja zibhonga lapho zidlala?
Ukuthi inja iyagquma ngenkathi idlala akuyona into engavamile, ngoba kulokhu, kuyindlela yokuzijabulisa. Kepha uma ufuna ukwazi kabanzi, ngena ngaphakathi uthole.
Kungani inja yami ye-pug icwila nokuthi ungayisiza kanjani?
Uma wake wathi `` inja yami ye-pug iyaminza '', ngena sizokutshela ukuthi kungani lokhu kwenzeka nokuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe ukwenza ngcono impilo yakhe.
Ugeza kanjani inja okokuqala ngqa
Ungayigeza kanjani inja okokuqala ngqa? Uma ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzilandele ukuze uboya bakho buhlanzeke kakhulu, ngena.
Kusho ukuthini ukukhonkotha kwezinja?
Kumele ukhumbule ukuthi izinja zikhonkotha ngasizathu simbe noma zidonse ukunakwa. Thola esihlokweni sethu ukuthi ungakubona kanjani ukukhonkotha.
Kungani izinja zingumngani omkhulu womuntu?
Bekuhlale kushiwo ukuthi ama-buts angumngani omkhulu womuntu, okuyiqiniso. Faka bese uthola ukuthi kungani nezinzuzo zayo.
Ungakuthola kanjani ukwethenjwa yinja yethu?
Ngabe unelungu elisha lomndeni elinemilenze emine futhi wesaba kakhulu noma akathembi? Faka bese uthola ukuthi ungakuthola kanjani ukwethenjwa yinja yethu.
Izinzuzo zekhola le-locator yenja
Sizokutshela ngobuhle be-locator collar yezinja, ithuluzi elisha elizokuvumela ukuthi ujabulele ukuhamba okuningi nenja yakho enoboya.
Ngokufika kwentwasahlobo, izimbali zifika, utshani buyakhula futhi kuvela izipikisi ezithinta inja yakho. Thola ukuthi ungaziqeda kanjani emzimbeni wakho.
Ingabe izinja ziyabazi abazali bazo?
Wake wazibuza ukuthi abazali bayabazi yini abazali babo? Uma kunjalo, ungalindi isikhathi eside bese ungena ukuze siphendule umbuzo wakho.
Ingabe izinja zizizwa zinecala?
Yize sicabanga ukuthi yizinja okufanele zisolwe, nakanjani ubuso obenzayo abunacala, kepha ukwehlisa umoya, ngakho ngena uthole lokho esikutshela kona.
Ungathanda ukwazi ukuthi inkumbulo yenja injani? Unganqikazi! Faka bese uthola ukuthi hlobo luni lwememori abanalo nokuthi kungani be ... njengoba benjalo. :)
Kungani izinja zisikhotha?
Thola ukuthi kungani izinja zisikhotha nokuthi kuwumqondo omuhle yini ukuziyeka zikwenze. Faka futhi sizoxazulula konke ukungabaza kwakho. Ungaphuthelwa.
Ngabe izinja zingathatha i-paracetamol?
Wake wazibuza ukuthi izinja zingathatha i-acetaminophen? Uma kunjalo, ngena sizokuxazululela ukungabaza ukuze ugweme ukucasuka.
Yini okufanele ngiyenze uma inja yami izama ukuhlasela enye inja?
Yini okufanele ngiyenze uma inja yami izama ukuhlasela enye inja? Uma ubomvu bakho bubonakala bungazithandi ezinye izinja, ngena sizokutshela ukuthi ungakugwema kanjani ukuhlukunyezwa.
Kungani inja yami ihlanza kakhulu?
Uzibuza ukuthi kungani inja yami ihlanza kakhulu? Faka futhi sizotshela ukuthi yiziphi izimbangela ezingaba khona nokuthi yini okufanele uyenze ukuyithuthukisa.
Amathiphu okwamukela izinja ezincane
Sikunikeza amathiphu amaningi okwamukelwa kwezinja ezincane ezizosiza kakhulu uma uhlela ukwandisa umndeni :).
Yimiphi imigomo yokuphoqa inja ye-puppy?
Ngena sizokutshela ukuthi yimiphi imigomo yokugoma ephoqelekile yezinja zezinja nokuthi kufanele zinikezwe kangaki ukuze amasosha azo omzimba aqiniswe.
Sikutshela konke ngemvelaphi yenja: isiphi isilwane sasendle esivela kuso, lapho iqala ukufuywa ... nokunye okuningi. Ukungena.
Ungayibona futhi uyiqede kanjani amazenze enja yakho ekhaya?
Kunezici ezithile ezingasisiza ukuthi sazi ukuthi amazeze ahlala yini emakhaya ethu, ngakho-ke naka indatshana yethu.
Kungani inja yami ikhonkotha ezinye izinja lapho ibhande?
Uzibuza ukuthi kungani inja yami ikhonkotha ezinye izinja uma isendaweni ethile futhi yini ongayenza ukuyigwema? Ngena sizokusiza.
Ungasisebenzisa nini isifonyo enjeni?
Thola ukuthi ungasisebenzisa nini isifonyo enjeni ukugwema izinkinga esikhathini esifushane noma esiphakathi. Ngaphezu kwalokho, sikutshela izinhlobo ezikhona ukuze ukwazi ukukhetha efanelekile kakhulu.
Uyini umehluko phakathi kwezinja nezinja zesifazane?
Ngabe uhlela ukwamukela inja kepha okokuqala ufuna ukwazi ukuthi yini umehluko phakathi kwezinja nezimbungulu? Uma kunjalo, ngena sizokutshela ukuthi wenze kube lula ukuthi ukhethe. :)
Izinzuzo nobubi be-inbreeding yezinja
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini inbreeding in izinja, ngaphandle kokwazi ukuthi inja yakho inozalo lozalo? Ngena uthole.
Kusho ukuthini ukuphupha izinja?
Ngabe uhlala unamaphupho ngezinja futhi ufuna ukwazi ukuthi kusho ukuthini ngaso sonke isikhathi? Ngena uthole.
Izinja zicabanga kanjani
Sikutshela ukuthi izinja zicabanga kanjani futhi, ngaphezu kwalokho, sincoma izincwadi ezivela kumshicileli ukuze ufunde kabanzi ngazo. Ukungena.
Kusho ukuthini uma inja igibele enye inja
Ungathanda ukwazi ukuthi kusho ukuthini lapho inja igibela enye inja? Uma kunjalo, ngena sizokutshela ukuthi yini izimbangela nokuthi yini okufanele uyenze ukuzixazulula.
Ukusetshenziswa kwe-apula cider uviniga ezinjeni
Thola kulesi sihloko zonke izinzuzo nokusetshenziswa kwe-apula cider uviniga ezinjeni.
Ziyini izinja zokuhlasela?
Sikutshela ukuthi yiziphi izinja ezihlaselayo nokuthi zinemisebenzi enjani. Ngaphezu kwalokho, uzothola ukuthi ziyingozi yini noma cha nemiphumela yokuqeqeshwa okungafanele.
Kuyini strabismus ezinjeni?
Sikutshela konke nge-strabismus ezinjeni: ukuthi kuyini, kubangelwa yini, ukwelashwa ... nokunye okuningi. Faka ukuthola ukuthi ngabe ubomvu bakho bunale nkinga yamehlo.
Uyazi ukuthi iHeterochromia ikuphi ezinjeni? Wake wazibona izinja ezinamehlo anemibala ehlukene? Faka bese uthola ukuthi yiziphi izinja ezinalesi sici.
Amabhishi amahle kakhulu ezinja
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yimaphi amabhishi amahle kakhulu lapho zivumela izinja ukuthi zingene khona? Ngena uzitholele endabeni yethu yanamuhla.
Ungaligwema kanjani iphunga lenja emanzi?
Ungaligwema kanjani iphunga lenja emanzi? Uma ukhathazekile ngokuthi inja yakho enoboya izokhipha iphunga elibi lapho uya olwandle noma echibini, ngena sizokutshela ukuthi ungakuvimbela kanjani.
Konke mayelana nemikhaza ezinjeni
Sikutshela konke ngemikhaza yezinja. Thola ukuthi ungazithola kanjani futhi uziqede, ngamakhambi emvelo nama-antiparasitics.
Liyini izinga lokushisa elijwayelekile ezinjeni?
Liyini izinga lokushisa elijwayelekile ezinjeni? Uma uhlala nomuntu onoboya futhi futhi ufuna ukwazi ukuthi ungaphuzwa kanjani, unganqikazi: faka.
Ungasika kanjani izingqangi zenja
Ngabe unayo inja enama-bangs ayisayivumeli ukuthi ibone noma yini? Isikhathi sokusika ukuqhuma kwenja yakho, ngakho-ke naka.
Indlela yokuxubha amazinyo enja
Sikutshela ukuthi ungaxubha kanjani amazinyo enja ukuze ukwazi ukubambezela ukuqala kwezifo zomlomo ngangokunokwenzeka futhi ujabulele ukumamatheka kwawo okuhle isikhathi eside.
Yini izinja ezihamba phambili?
Izinja ze-Vent yizilwane ezinhle eziqeqeshelwe ukusindisa izimpilo zabantu. Faka bese uthola konke mayelana nabo.
Wake waphupha ngezinja futhi ufuna ukwazi incazelo yala maphupho? Ngena uthole.
Ziyini izinzuzo zokuba nenja?
Ngabe ucabanga ukwamukela ingane kodwa awazi ukuthi ziyini izinzuzo zokuba nenja? Uma kunjalo, ngena sizokutshela ukuthi kungani kuwumqondo omuhle ukuhlala noyedwa.
Kusho Ukuthini Izikhundla Zokulala Kwenja
Sikutshela ukuthi izikhundla zezinja zokulala zisho ukuthini. Thola ukuthi yiziphi izikhundla abazithathayo nokuthi kungani bekwenza ukuze babaqonde kangcono.
Kungani inja yami yehlisa izindlebe zayo lapho ngiyiphathisa
Uzibuza ukuthi kungani inja yami yehlisa izindlebe zayo lapho ngiyiphathisa? Uma kunjalo, futhi ufuna ukuqonda kangcono ulimi lomzimba lomngane wakho, ngena.
Yikuphi ukuziphatha okungokwemvelo kwezinja?
Yikuphi ukuziphatha okungokwemvelo kwezinja? Uma ufuna ukwazi ukuthi lezi zilwane ziziphatha kanjani ngokwemvelo, ngena.
Ungayimisa kanjani inja yami ekucabangeni ngamathoyizi
Uzibuza ukuthi ungayigcina kanjani inja yami ekucabangeni ngamathoyizi? Uma kunjalo, ngena bese ulandela izeluleko zethu ukuze umngani wakho abe yisilwane esizolile nesijabulayo.
Ikhalelani inja yami?
Ikhalelani inja yami? Uma ufuna ukwazi ukuthi kungani esabela ngale ndlela nokuthi yini okufanele uyenze ukuyixazulula, ngena.
Kungani inja yami idla iphepha
Uzibuza ukuthi kungani inja yami idla iphepha? Uma kunjalo, ngena uthole ukuthi kungani usabela ngale ndlela nokuthi yini okufanele uyenze ukulungisa inkinga.
Qala ukwenza i-Canicross nenja yakho
Thola ukuthi ungaqala kanjani ukuzijwayeza i-canicross nenja, umdlalo osezingeni eliphezulu lapho inja nomnikazi begijimisana ndawonye ukufinyelela entanjeni.
Izinzuzo zesinamoni ezinjeni
Ingabe inja yakho iyasithanda isinamoni nakho konke okuqukethe isinamoni, kepha ingabe wesaba ukuthi kubi futhi kuyenza izizwe kabi? Ngena uthole.
Yisikhathi sodwendwe lukaphayini
Sisesikhathini lapho kuvela udwendwe lukaphayini, isilwane esincane kakhulu esingadala izinkinga ezinkulu empilweni yenja.
Ukwemukela injana ngeminyaka emingaki?
Uyazi ukuthi uneminyaka emingaki yokwamukela injana? Uma ucabanga ukukhulisa umndeni ngoboya, ngena sizokutshela ukuthi yisiphi isikhathi esikahle sokuya nawo ekhaya.
Kungani inja yami ikhotha umhlabathi?
Kungani inja yami ikhotha umhlabathi? Uma uboya bakho buqale ukwenza lokhu kuxaka futhi ungathanda ukwazi ukuthi kungani, ngena.
Izinto ezi-4 okufanele uzikhumbule uma uhamba nenja
Uma uzohamba nenja, kufanele ubheke izinto ezithile ukulungiselela lelo holidi, kusuka kumadokhumenti akho kuya emithwalweni yakho.
Kufanele uyibeke nini ikhola enjeni?
Uyazi ukuthi uyibeka nini ikhola enjeni? Akunjalo? Ngena ungene sizokutshela ukuthi kukuziphi izimo okubaluleke kakhulu ukuwugqoka nokuthi ungakujwayela kanjani ukuwugqoka.
Ziyini izimpawu zenja enesithukuthezi?
Ngabe uchitha isikhathi esiningi ungekho ekhaya futhi awunaso isikhathi sokuthatha inja yakho uhambe noma udlale? Thola izimpawu zokwazi uma inja yakho inesithukuthezi.
Imininingwane yokuthi ungahamba kanjani ngesitimela nenja yakho
Ngabe kufanele uthathe uhambo futhi inketho yakho engcono kakhulu ukuthatha uhambo lwesitimela kepha awazi ukuthi inja yakho izokwazi yini ukuhamba nawe? Ngena uthole.
Inja kumele ibe namathoyizi amangaki?
Inja kumele ibe namathoyizi amangaki? Uma ungathanda ukwazi ukuthi mangaki ama-furry wakho okumele abe nawo ukuze ajabule, ngena sizophendula umbuzo wakho.
Siyini isikhathi sokuphila sezinja ezinkulu?
Ingabe unayo inja enkulu emndenini wakho futhi ufuna ukwazi ukuthi bahlala isikhathi esingakanani? Ngena uzitholele esihlokweni sanamuhla.
Ngazi kanjani ukuthi inja yami iyesaba?
Ngazi kanjani ukuthi inja yami iyesaba? Uma ufuna ukwazi ukuthi inja ebhekene nobunzima iziphatha kanjani nokuthi ungayisiza kanjani, ngena sizokuchazela okufanele ukwenze.
Ngingayenza kanjani inja yami ibe nobungane? Uma usanda kuthola uboya futhi ungathanda ukuthi afunde ukuhlala emphakathini, ngena sizokusiza.
Kungumqondo omuhle yini ukuhlalisa phansi inja ukuze igunde izinwele zayo?
Wake wazibuza ukuthi kungumbono omuhle yini ukuthi uhlalise inja ukuze igundwe? Faka sizokutshela ukuthi ukwenze nini futhi kanjani ngendlela efanele.
Ungayisiza kanjani inja yakho ilale kangcono
Thola ezinye izinto ongazenza ukusiza inja yakho ilale kangcono, okuthile okubalulekile kuzo zombili izinja nabanikazi ukuba bavuke baphumule.
Ungadlali kanjani nenja?
Sichaza ukuthi AKUFANELE udlale kanjani nenja ukuze ikhule ifunda ukuziphatha. Ngena ungaphuthelwa.
Ngazi kanjani ukuthi inja yami ifuna ukudlala?
Ngazi kanjani ukuthi inja yami ifuna ukudlala? Uma ungabaza ukuthi ubomvu bakho bufuna ukuzijabulisa isikhashana, ngena sizokusiza uhumushe ulimi lomzimba wakhe.
Kungani ukhetha inja elahlekile?
Kungani ukhetha inja elahlekile? Uma ucabanga ukukhulisa umndeni wakho, ngena sizokutshela ukuthi kungani kungcono ukwamukela kunokuthenga.
Ungakunciphisa kanjani ukuchitheka kwezinwele ezinjeni
Ukulahleka kwezinwele kwesizini kuvamile kuzo zonke izinhlobo zezinja. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi iyithinta kanjani inja yakho futhi wazi amathiphu wesizini ye-molting?
Kungani ukuba nenja kungasindisa impilo yakho
Ukuba nenja kungasindisa impilo yakho ngokoqobo. Izinzuzo abasinika zona zinegalelo elihle empilweni enempilo, enokuzijabulisa ngokwengeziwe futhi enesibopho. Siyakuchazela!
Kungani inja iluma umnikazi wayo?
Kungani inja iluma umnikazi wayo? Uma ungathanda ukwazi ukuthi kungani lokhu kwenzeka nokuthi ungakugwema kanjani, ngena bese sizophendula imibuzo yakho.
Indlela ephumelela kunazo zonke yokujova inja yakho ekhaya
Ingabe ungomunye walabo bantu ngenxa yomsebenzi abangakwazi ukuthatha inja yakho ukuyigoma noma kunini lapho ufuna khona? Ungamgomela ekhaya, uqaphele.
Inja kufanele ilale kuphi?
Inja kufanele ilale kuphi? Uma kungokokuqala uhlala nomunye futhi unokungabaza ngokuthi ungayivumela ilale kuphi, ngena sizokusiza uthathe isinqumo.
Kungani ukhetha inja ye-hypoallergenic?
Sizokunikeza izizathu zokuthi kungani ukhetha inja ye-hypoallergenic, ikakhulukazi unezingane ekhaya noma unesifo sokuphefumula.
Zingaki izinsuku engingashiya inja yami yodwa?
Zingaki izinsuku engingashiya inja yami yodwa? Uma kufanele uthathe uhambo, ngena sizokutshela ukuthi uboya bakho bungahlala bodwa isikhathi esingakanani.
Ungasusa kanjani amakhaza enjeni yami ngokushesha
Ungawasusa kanjani amakhaza enjeni yami ngokushesha? Uma uzibuza ngalokhu, ngena sizokutshela ukuthi yini ongayenza ukuze ubomvu bakho buphefumule ngokuthula futhi.
Yini okufanele uyenze lapho umdlwane wakho ubuya ekhaya?
Yini okufanele uyenze lapho umdlwane wakho ubuya ekhaya? Uma usanda kuthola uboya futhi ungazi ukuthi wenzeni ngosuku lokuqala naye, ngena sizokweluleka.
Ungayiphathisa kanjani inja kahle
Thola ngodaba lwanamuhla izindlela ezifanele zokufuya inja, noma ngabe kuyinja noma yinja ongakaze uxhumane nayo phambilini.
Ungayithulisa kanjani inja engasebenzi kahle
Uboya bakho abuyeki ukugijima nokugxuma? Ngena sizokutshela ukuthi ungayihlalisa kanjani inja engasebenzi kahle, ngamathiphu namasu alula.
Izitshalo ezinobuthi ezimbi kakhulu zezinja
Ukusebenzelana nenja efakwe ubuthi esitshalweni kungaba isimo esesabekayo. Ngibiza bani? Kumele ngenzeni? Ngingakugwema kanjani? Ngena uthole.
Ngenzenjani uma ngithola inja emgwaqweni?
Ngenzenjani uma ngithola inja emgwaqweni? Uma uzithola ukulesi simo futhi ungazi ukuthi kufanele wenze kanjani, ngena sizokusiza.
Yiziphi izinja zasepulazini ezihamba phambili?
Uma unensimu enemfuyo futhi udinga ukwazi ukuthi iziphi izinhlobo ezifanele zokuyinakekela, ngena bese uthola ukuthi yiziphi izinhlobo zezinja ezinhle kakhulu.
Izintshisakalo ngezinja ezizokumangaza
Sikutshela uchungechunge lwezifiso mayelana nezinja ezizokumangaza nakanjani. Awukholwa kimi? Ngena uzitholele ngokwakho.
Ngabe ucabanga ukwamukela uboya kepha okokuqala ufuna ukwazi ukuthi ziyini izinzuzo zokuba nenja? Unganqikazi: ngena sizokutshela ukuthi kungani uhlala nenja.
Umsila wenja yakho, ulimi ongaluthola
Ulimi lomzimba lubalulekile endleleni yenja yokuxhumana; ikakhulukazi, ukunyakaza komsila wayo kukhombisa isimo sayo somqondo. Zithole.
Yini okufanele uyenze uma inja yami ilahlekile noma yebiwe?
Yini okufanele uyenze uma inja yami ilahlekile noma yebiwe? Uma uzithola ukulesi simo, ngena sizokutshela ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe ukuze uzithole.
Funda ukusika izinzipho zenja yakho ekhaya
Kungani kubalulekile ukufunda ukusika izinzipho zenja yakho? Ngena bese ulandela amathiphu ethu ukuze ugweme ukulimaza inja yakho.
Ingabe usukulungele ukuba nenja?
Uyazi ukuthi usukulungele ukuba nenja? Uma unemibuzo eminingi, faka futhi sizozama ukuyixazulula yonke. Thola ukuthi yini inja edinga ukujabula.
Yini inkontileka yokutholwa kwezilwane?
Yini inkontileka yokutholwa kwezilwane? Lapho samukela eyodwa enoboya, bazosenza sisayine idokhumenti ebaluleke kakhulu. Faka sizokutshela ukuthi iyini nokuthi yenzelwe ini.
Impilo yenja yinde kangakanani?
Uma kungokokuqala ukuthi uhlale noboya, ngena sizokutshela ukuthi impilo yenja ihlala isikhathi esingakanani ukuze ukwazi ukusebenzisa wonke umzuzu nayo.
Kungani kungafanele senze ubuntu benja?
Uma esikufunayo kungukuthi inja yethu ibe inja enempilo futhi ejabule, masibe njalo, njengenja nje futhi asifuni ukuyenza ibe ngeyabantu.
Izinja njengokwelapha kwesizungu
Ubuwazi ukuthi ukwelashwa kwezinja asebekhulile nabanesizungu nasesibhedlela kunezinzuzo eziningi? Ngena uthole.
Amathiphu okugeza inja yakho ebusika
Ngokufika kwamakhaza, kufanele kuthathwe izinyathelo eziningana ukuvimbela inja ekuguleni ngesikhathi nangemva kokugeza. Bhala phansi lawa macebiso okugeza inja yakho ebusika futhi uzokwazi ukuvikela impilo yayo.
Isizungu seCanine: wazi kanjani ukuthi inja yakho inesizungu esikhulu?
Uyabona ukuthi inja yakho ibhorekile noma ibuthuntu muva nje? Uyabona ukuthi akafuni nakancane ukudla uma ungekho? yilowo ohlushwa isizungu se-canine.
Ungayinakekela kanjani inja eyisithulu
Ngabe umngani wakho onemilenze emine utholwe enesithulu? Ungakhathazeki. Ngena sizokutshela ukuthi uyinakekela kanjani inja engezwa.
Amaphunga amahlanu izinja ezizondayo
Kukhona amanye amaphunga ikhala elilungele inja elingeke lithwale, njengowolintshi noma utshwala. Ngakho-ke, kungcono ukuzigwema.
Ungalushukumisa kanjani iphunga lenja
Sikutshela ukuthi ungalivuselela kanjani ikhala lenja ukuze likwazi ukujabulisa futhi, ngenhlanhla, lijabule ngendlela engakaze ibonwe ngaphambili.
Yimaphi amaphutha enziwa ngezinja?
Yimaphi amaphutha enziwa ngezinja? Zithole futhi, kanjena. uzokwazi ukufundisa umngane wakho njengoba kumfanele: ngenhlonipho nangothando.
Singabhekana kanjani nokufa kwenja?
Ukufa kwesilwane sethu, noma ngabe kuyinja noma ikati, yinto okumele sibhekane nayo, ngaphezu kwakho konke kumele sifundise izingane ukubhekana nakho.
Ubusika buyeza, lungisa inja yakho
Uyazi ukuthi amakhaza nobusika kulapha? Nakekela inja yakho njengoba imfanele ngalesi sikhathi sonyaka, ngakho-ke ngena uthole ukuthi kanjani.
Izincomo zokuhlanza izindlebe zenja yakho
Uyazazi izimpawu ezisho ukuthi inja inezindlebe ezingcolile? Uyazi ukuthi ungazihlanza kanjani izindlebe zakho ngempumelelo? Qaphela.
Ziyini izinzuzo zokwelashwa kwezinja kubantu asebekhulile?
Ubuwazi ukuthi ukwelashwa kwezinja asebekhulile kunezinzuzo eziningi? Faka sizokutshela ukuthi ziyini nokuthi kungani zibaluleke kangaka.
Inja yakho iyeke ukudla ubusuku bonke futhi ufuna ukwazi izizathu zokuthi kungani inja ingafuni ukudla? Ngena uthole.
Umuzwa wokuzwa enjeni
Kanye nephunga, ukuzwa kungenye yezinzwa ezithuthuke kakhulu zenja, ngoba iyakwazi ukubona imisindo ekhishwa ebangeni lamamitha angama-25.
Ungayinakekela kanjani amaphedi enja? Uma uboya bakho ngokuvamile buba nezinkinga ngemilenze yakhe, ngena sizokunikeza amathiphu okubavimba.
Yini okufanele uyenze lapho inja ichitha izinwele zayo?
Yini okufanele uyenze lapho inja ichitha izinwele zayo? Uma ungathanda ukuthi ingashiyi umzila wezinwele omningi ngasendlini, ngena sizokutshela okufanele ukwenze.
Iziphumuli zemvelaphi yemvelo yezinja
Ingabe inja yakho inovalo noma iyakhathazeka futhi awazi ukuthi ungayithulisa kanjani? Thola ukuthi iziphi izinto zokuphumula zemvelo ezinhle kakhulu.
Kungani ungaziniki izinja ngoKhisimusi?
Ngokufika kwamaholide athandeka kakhulu onyakeni, kubalulekile ukuzibuza ukuthi kungani ungaziniki izinja ngoKhisimusi. Faka bese uthola ukuthi kungani.
Ungazisika kanjani izinwele ze-Yorkshire tererier
Sikutshela ukuthi ungazisika kanjani izinwele zeYorkshire, inja encane kodwa enenhliziyo enkulu edinga usizo oluncane ukugcina ijazi layo liphilile.
Kwenzekani uma inja ingathathwanga ukuhamba? Sixazulula ukungabaza kwakho futhi sichaze, ngaphezu kwalokho, ukubaluleka kokuhamba kwansuku zonke.
Ungayithulisa kanjani inja?
Sikutshela ukuthi ungayithulisa kanjani inja. Funda konke odinga ukukwazi ukuze umngani wakho akwazi ukuphumula ezimeni ezinzima.
Ungayinakekela kanjani inja yami yerokhethi
Uzibuza ukuthi uyinakekela kanjani inja yami yerokhethi? Uma uboya bakho bunzima ngeziqhumane, ngena sizomsiza wehlise umoya.
Intuthu kagwayi izithinta kanjani izinja?
Intuthu kagwayi izithinta kanjani izinja? Sikutshela konke odinga ukukwazi ngomonakalo odalwe ngogwayi kubangani bethu abanoboya.
Ezinye izinhlobo zezinja ezivame ukuhlushwa yi-tartar emazinyweni
Ungayisusa kanjani i-tartar ezinjeni ekhaya? Unganqikazi: ngena uthole ukuthi ungawugcina kanjani umlomo wakho woboya uphilile futhi uhlanzekile.
Kungani inja yami ingakhonkothi?
Kungani inja yami ingakhonkothi? Uma ukhathazekile ngomngane wakho onemilenze emine, unganqikazi: ngena sizokutshela ukuthi kungani singenzi umsindo.
Philisa amanxeba enja usebenzisa ushukela njengekhambi lemvelo
Ubuwazi ukuthi ushukela wakwazi ukupholisa amanxeba avulekile enja? Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani? Ngena uthole.
Kungani izinja zixhunywa ngemuva kokukhwelana?
Thola ukuthi kungani izinja zibambeka ngemuva kokukhwelana. Kubi yini ukubahlukanisa? Susa ukungabaza ngokuzala nokukhwelana kwezinja
Ungayithatha kanjani inja yami emotweni?
Ngena sizokutshela ukuthi ungayithatha kanjani inja yami emotweni. Thola okudingayo ukuze uboya bakho buhambe ngokuphepha ngaphakathi emotweni.
Ukulahleka kwezinwele nokuchitheka kwezinja
Ingabe izinja eziqabulayo zimbi?
Uma uzibuza ukuthi ngabe kubi yini ukuqabula izinja noma uma ufuna ukwazi ukuthi ukuqabula inja yakho akunangozi yini, ngena uthole ukuthi.
Kunjani ukuziphatha kwezinja ezinja?
Sikutshela ngokuziphatha kwezinja ze-puppy. Thola ukuthi unjani umlingiswa walezi furry nokuthi ungazenza kanjani ziziphathe kahle.
Kungani kungcono ukwamukela inja kunokuyithenga?
Ngabe uhlela ukukhulisa umndeni ngoboya obusha? Faka sizokutshela ukuthi kungani kungcono ukwamukela inja kunokuyithenga.
Ukuthena inja noma cha
Ukuchitha imali kanye ne-neutering kunezinzuzo eziningi zezilwane ezifuywayo, kanye nokwenza okuncane ekulweni nokugcwala kwe-canine.
Izinzuzo zamanzi olwandle ngempilo yenja yethu
Thola ukuthi amanzi olwandle kanjani futhi sibonga izinzuzo zalo ezinhle, ukuthi zingasiza kanjani impilo yenja yethu. Faka futhi uthole.
Kufanele ngidlale isikhathi esingakanani nenja yami?
Uzibuza ukuthi kufanele ngidlale isikhathi esingakanani nenja yami? Uma kungokokuqala uhlala nomunye futhi unokungabaza, ngena.
Ziyini izimpawu zokuguga ezinjeni?
Sikutshela ukuthi ziyini izimpawu zokuguga ezinjeni nokuthi yini ongayenza ukuze unakekele kangcono umngane wakho. Ukungena.
Yiziphi izinhlobo ezinhle kakhulu zezinja zezingane
Ungathanda ukwazi ukuthi iziphi izinhlobo zezinja ezinhle kakhulu zezingane? Faka bese uthola okunye okuthakazelisa kakhulu.
Siyini isikole sezinja?
Sikutshela ukuthi siyini nokuthi ungasikhetha kanjani isikole sezinja ukuze umngani wakho afunde imithetho eyisisekelo yokuhlalisana ndawonye ukuze ajabule.
Izeluleko ezi-5 zenja yakho ukuthi ibe noKhisimusi omuhle
Ngabe ufuna inja yakho ijabulele namaholide kaKhisimusi asezofika? Faka bese uthola amathiphu ethu.
UBuddy nomlando wezinja eziqondisayo
Ukusetshenziswa kwezinja njengemihlahlandlela yezimpumputhe kwaqala ngekhulu le-XNUMX, yize icala lokuqala elaziwayo elikaBuddy, umalusi wesifazane waseJalimane.
Ungayethula kanjani inja enganeni
Ngabe ufuna ingane yakho ikwazi ukusondela futhi ingabi nankinga eduze kwenja? Ingabe wesaba ukuthi izokuluma? Thola ukuthi ungazenza kanjani izethulo.
Ungazelapha kanjani izilwane ezine-homeopathy
Sikutshela ukuthi ungazelapha kanjani izilwane nge-homeopathy, ukwelashwa kwemvelo ongasiza ngakho uboya bakho ezimweni zokugula okuncane.
Yiliphi igama okufanele ngilinike inja yami (owesilisa nowesifazane)
Uzibuza ukuthi uzoyetha ini inja yami ini? Faka sizokutshela okunye kwabesilisa nabesifazane. Ngokuqinisekile uzomthola oyifunayo. :)
I-hydration eyanele yenja yakho
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi kungani kubaluleke kangaka ukuthi inja yakho ifakwe amanzi kahle? Faka bese uthola ukuthi kungani inja yakho kufanele njalo ibe namanzi ahlanzekile futhi ahlanzekile.
Kungani inja ingayeki ukuqhaqhazela?
Uke wabona ukuthi inja yakho kwesinye isikhathi iyaqhaqhazela? Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini ebangela ukuthi inja yakho ithuthumele? Ngena uthole.
Kungani inja yakho iklwebha?
Uke waqaphela ukuthi inja yakho ayenzi lutho ngaphandle kokuziklwebha nje? Ngabe ukhathazekile ngokuthi inja yakho izolimala? Faka bese uthola ukuthi ungakusiza kanjani.
Ungazisika kanjani izinwele zeMalta
Thola ukuthi ungazisika kanjani izinwele zeMalta. Funda ukuthi ungayigcina kanjani ingubo yomngane wakho iphilile futhi icwebezela.
Amathiphu wokuvikela inja yakho emakhazeni
Sikunikeza uchungechunge lwezeluleko zokuvikela inja yakho emakhazeni. Menze akhululeke futhi aphephe ekhaya phakathi nalezi zinyanga.
Okufanele ukwenze uma inja yami iklinya
Ngabe ubomvu bakho budle okuthile okuvimba ukuthi angaphefumuli kahle? Ngena sizokutshela okufanele ukwenze uma inja yami iklinya.
Uhlala kanjani nenja ekhubazekile
Uma uthola inja enohlobo oluthile lokukhubazeka, kufanele ungaguquguquki futhi wazi ukunakekelwa okudingayo, ngoba lokhu akuyona ithoyizi.
Izimbangela ezinkulu zokufa ezinjeni ezindala
Uma ungumnikazi oziqhenyayo wenja eneminyaka engu-8 noma eyi-10 ubudala, naka izimbangela zokufa kwezinja ezindala kanye nezimpawu zazo.
Ungalwa kanjani nephunga lezinja ezimanzi?
Manje njengoba sikwindla futhi inganqamuki imvula, unayo ukuphuma okungapheli? Ingabe inja yakho inuka amandla lapho iba manzi? Beka ibhuleki kuso.
Ungenza kanjani ngokwezifiso ukhola wenja yami
Uzibuza ukuthi ungayenza kanjani ngokwezifiso ikhola yenja yami? Uma indala noma ufuna ukuyinika ushintsho olungcono, unganqikazi ukungena.
Funda ukwehlisa ukwesaba okuhlukile kwenja yakho
Uma ufuna ukwazi ukuthi yini enye ongayenza lapho umlingani wakho othembekile ekhathazekile futhi enovalo, funda le ndatshana lapho sikunikeza khona izeluleko ezinhle kakhulu.
Ungakuxazulula kanjani ukwesaba kwezitebhisi kwenja?
Ingabe inja yakho ikhubazeka njalo lapho kufanele inyuke noma yehle izitebhisi ezithile? Landela lezi zeluleko ezizokusiza ngendlela elula.
Ungazi kanjani ukuthi inja yami inohlu lozalo
Ngazi kanjani ukuthi inja yami inohlu lozalo? Uma ungabaza ukuthi ubobo bakho bungobuhlanga noma imestizo, unganqikazi ukungena ukuthola.
Kungani ukhetha inja enkulu?
Kungani ukhetha inja enkulu? Uma ngabe ucabanga ukwamukela inja enoboya, unganqikazi ukungena futhi uthole izinzuzo zokuhlala nenja enkulu.
Yini izindawo zokukhosela izilwane?
Siyakutshela ukuthi ziyini izindlu zezilwane nokuthi yini okufanele uyazi uma ufuna ukuthatha inja okwesikhashana.
Kukangaki kufanele ngikhiphe izikelemu inja yami?
Ngabe uyazibuza ukuthi uvusa kangaki inja yami? Uma ungabaza, sizozixazululela zona. Unganqikazi ukungena. ;)
Isikhathi esingakanani kufanele uhambe inja?
Ngabe usanda kwamukela enye enoboya futhi ungathanda ukwazi ukuthi kufanele uhambe inja isikhathi esingakanani? Uma kunjalo, ngena bese sizophendula umbuzo wakho.
Amathiphu wokuhamba nenja emvuleni
Uyalunguza ngewindi ubone ukuthi lina? Ngabe uyavilapha ukuphuma emvuleni futhi inja yakho iba manzi ngokuphelele? Thola lawa macebiso.
Kubiza malini ukugcina inja?
Ingabe ucabanga ukuba nenja? Uma kunjalo, okokuqala, ngena sizokutshela ukuthi kubiza malini ukugcina inja. Ungaphuthelwa.
Ungayisusa kanjani i-tartar ezinjeni ekhaya?
Uyini umehluko phakathi kwezinja nezinja?
Ngabe uhlela ukwamukela noma ukuthola inja kepha ungazi ukuthi ukhethe yiphi? Faka sizokutshela ukuthi yini umehluko phakathi kwezinja kanye nezinja.
Yini ongayithenga ngaphambi kokuletha inja ekhaya?
Yini ongayithenga ngaphambi kokuletha inja ekhaya? Uma ungazi ukuthi yini okudingeka uyithengele uboya bakho, unganqikazi ukungena.
Ungayijabulisa kanjani inja yami?
Uzibuza ukuthi ungayithokozisa kanjani inja yami? Uma ufuna umngane wakho onoboya amamatheke empilweni, unganqikazi ukulandela izeluleko zethu.
Izinganekwane ezidumile ngezinja
Ubumbano oluqinile phakathi kwenja nendoda lunikeze izinganekwane zokufuna ukwazi ezibhekene nalesi silwane, esixuba umlingo nedatha yangempela.
Inja yami inolaka, yini engingayenza?
Ingabe unayo inja enolaka futhi awazi ukuthi kufanele wenze kanjani? Ngabe udinga iseluleko lapho usebenza nenja enolaka? Ngena uthole.
Ukuguquka kwesimo sezulu kuzithinta kanjani izinja?
Ukuguquka kwesimo sezulu kuzithinta kanjani izinja? Uma uhlela ukuthuthela endaweni ehlukile yesimo sezulu, unganqikazi ukungena ukuthola ukuthi ungamsiza kanjani umngani wakho.
Ungayilungisa kanjani indawo yokubhucunga izinja
Sikutshela ukuthi ungayilungisa kanjani indawo yokubhucunga izinja ukuze nobabili nikwazi ukujabulela isikhashana esimnandi.
Lunjani usizi ezinjeni?
Siyakutshela ukuthi lunjani usizi ezinjeni nokuthi yini ongayenza ukuthuthukisa imimoya yabo. Landela amathiphu ethu ukukusiza ukuthi udlule kukho.
Uyisebenzisa nini inkampani ekhethekile yokuthutha izilwane
Ngabe uhlela ukuhamba futhi ungathanda ukwazi ukuthi uyisebenzisa nini inkampani ekhethekile yokuthutha izilwane? Uma kunjalo, ngena sizokuphendula umbuzo wakho.